K’anyị Lebaa anya na agwụgwa(RIDDLES), ma kọwaa uru agwụgwa bara – hoo!haa!!
Na mbụ anyị chetara na mgbe anyị bụ ụmụaka, na agwụgwa bụ ihe anyị ji egwu egwu. Ugbu a, m gaghị echeta ikpeazụ m nụrụ ka mmadụ kwuru, “Gwam Gwam Gwam”, ọzọ. Ọ bụrụla ihe mgbe ochie ndị ugbu a amaghịzị maka ya. Ya mere n’hoohaa ga-akpọtekwa ya n’ụra.
Agwụgwa dịbara gbooo, ọ dị kemgbe mmadụ bidoro kọba akụkọ ifo. O nweghị omenala màọbụ ndị nọ n’ụwa a na-enweghị nke ha. Ma ndị ọcha ma ndị isi ojii. Ha nile nwere agwụgwa. Ọ na-adị n’ụdị ajụjụ ajụrụ mmadụ, ọ ga-agbagwoju anya tupu azata ya. Ọ na-eme ka mmadụ chebaa echiche nke ọma makana ajụjụ ahụ gbasaara ihe gbara mmadụ òkìrìkiri. Nwatakịrị na-azata agwụgwa nke ọma, na-enwe amamihe, na-echemi echiche ime.
Ọ na-abụkwa ihe eji egwuri egwu, ụmụaka na-eji ya ama aka. Onye jụọ ibe, ibe ya ajụkwa ya. A na-emegide nke a ganye na-amara onye ike ga-agwụ site na-ịda ya màọbụ ichefu ihe ọzọ o ga-ajụ. Nke a na-eme ụbụrụ mmadụ a na-ahọ nkọ ka agụba. Onye a na-ajụ na-eche echiche maka azịza nke ajụrụ ya, ma na-echekwa maka nke ọ ga-ajụ. Ya bụ, ngige n’egwu, ọkụkọ n’egwu.
Taata, m ga-ewepụta agwụgwa iri na ise nke ndị Igbo, m jụọ ha, ịmara na-ịga azanwu ha. Azịza ha ga-abịa na ngwụsị ederede a. Mba mba, m gaghị aza ha, onye mara ha ya za. J
ka anyị nwalee ndị ka ma, gwa m gwa m gwa m, Igbo. Maka ndị isi na-achọ oku, o bụghị maka ndị ụbụrụ eke
Previous Post: NDI UWE OJII NA-ACHỤ NTA NDI ASHAWO N’ANAMBARA
Next Post: OTU NWOKE EWERELA AKA ODO PỊAGBUE NWUNYE YA NA STEETI ANAMBARA
Kedụkwanụ gwa m gwa m gwa m ọ bụ? Adị m njikere.